April 2021 - SonSon LinLin
သိကြားမင်း က နေ့စဉ် ရှိခိုးရသည့် လူ (၄) ဦး
April 30, 2021 sonsonlinlin 0
သိကြားမင်း က နေ့စဉ် ရှိခိုးရသည့် လူ (၄) ဦး👇👇👇 သိကြားမင်းက အောက်ပါ အကျင့်သီလ နဲ့ ပြည့်စုံသူများကို နေ့စဉ် ရှိခိုးလေ့ ရှိပါတယ်။ ၁။ ကြာမြင့်စွာကာလကထဲက မြတ်သော အကျင့်ရှိကြတဲ့ ရဟန်းသူတော်စင်များ။ ၂။ ပရဟိတ စိတ်ရှိပြီး ဒါနဝတ်ရှိတဲ့ လူဝတ် သူတော်စင်များ။ ၃။ ငါးပါး၊ ရှစ်ပါး၊ ဆယ်ပါး စသည်အားဖြင့် အကျင့်သီလ ရှိကြတဲ့ လူဝတ် သူတော်စင်များ။ […]
ငါးရက္အတြင္း ေပြး၊ညႇင္း တင္းတိတ္၊ဝက္ၿခံ ၾကက္သြန္နီျဖင့္ သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့နည္း
ငါးရက်အတွင်း ပွေး၊ညှင်း တင်းတိတ်၊ဝက်ခြံ ကြက်သွန်နီဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း ပွေး၊ ညှင်း၊ တင်းတိတ်၊ ဝက်ခြံဖုမေ ပါက်ဖူး တဲ့ သူ မ ရှိ ပါဘူး ပေါက်ဖူး တဲ့သူတွေ ချည်း ပါပဲ။စိုးရိမ် စရာ ရောဂါ အနာမ ဟုတ်ပေ မယ့်ငါးရက်အတွင်း ပွေး၊ညှှင်း တင်းတိတ်၊ဝက်ခြံ ကြက်သွန်နီဖြင့့် သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့နည်း မျက်နာ ပေါ်မှာ အပေါက် များတဲ့ ရောဂါ တွေဖြစ် လို့အလှ […]
ဆံပင္အရွည္နဲ႔ေကာင္မေလးေတြကို ေကာင္ေလးေတြပိုၿပီး ျမတ္ႏိုးရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း
ဆံပင်အရှည်နဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကောင်လေးတွေပိုပြီး မြတ်နိုးရတဲ့ အကြောင်းအရင်း ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ ကိုကိုပုရိသတို့အတွက်တော့ စိတ်ကူးယဉ်ပန်းခင်းကြီးပါပဲချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်အရှည်တွေဟာ အမျိုးသားတွေအတွက်တော့ လဲလျောင်းချင်စရာ နူးညံ့လွန်းတဲ့ ကတ္တီပါကောဇောတစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ကိုကိုတို့ဟာ ကာယကံရှင် တွေထက် တောင် ပိုပြီးသည်းသည်းလှုပ်တတ်ကြပါသေးတယ် ဆံပင်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါ လှပလွန်း တဲ့ ကေသာတွေဟာ အမျိုးသားတွေရဲ့အချစ်ကို ဆွဲဆောင်ဖို့ 80% လုံလောက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ထက်ကိုယ့်ရဲ့ဆံပင်ကိုပိုပြီး ချစ်နေတယ် ဆိုရင် ပျိုမေတို့အနေနဲ့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့။ ဒါဟာပျိုမေတို့ကိုချစ်လို့ ပျိုမေတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ […]
ညအိပ္ခ်ိန္မွာ ဘရာဇီယာခြၽတ္အိပ္သင့္သလား ?
ညအိပ်ချိန်မှာ ဘရာဇီယာချွတ်အိပ်သင့်သလား ? မိန်းကလေးအချို့က ဘရာဇီယာကိုအချိန်တိုင်း၊အချိန်ပြည့် ဝတ်ထားရတာကိုပဲသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘရာဇီယာကရင်သားတွဲကျခြင်းနှင့် ရင်သားပုံမကျခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ဖို့အတွက်အမြဲဝတ်ထားသင့်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ညအိပ်တဲ့အခါမှာတော့မဝတ်သင့်ပါဘူးနော်။ ညအိပ်တဲ့အခါမှာ ဘရာဇီယာဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လိုဆိုကျိုးတွေသက်ရောက်နိုင်လဲဆိုတာကို သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ညအိပ်ချိန်မှာတင်းကြပ်နေတဲ့ဘရာဇီယာဝတ်အိပ်ခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ရင်သားကြီးထွားမှုကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဟော်မုန်းဓာတ်မညီညွတ်ခြင်းကြောင့် စိတ်ခံစားမှုအတက်အကျမြန်ခြင်းစတဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့် ညဘက်အိပ်တဲ့အခါ တင်းကြပ်နေတဲ့ဘရာဇီယာဝတ်ပြီးမအိပ်သင့်ပါဘူးနော်။ ညဘက်ချွေးအလွန်အကျွံထွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်း ဘရာဇီယာဝတ်အိပ်သူတွေ ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါပဲ။ ချွေးထွက်လွန်းတာကြောင့် ယာယံခြင်း၊ ဓာတ်မတည့်ခြင်းစတာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အရေပြားရောဂါအတွက်လည်း ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်တာကြောင့် အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ညအိပ်တဲ့အခါမှာ […]
မ ဖ်က္ရင္ ျပည္ပ်က္မယ္ဆိုတဲ့စကား ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး မိန႔္ၾကား
မ ဖျက်ရင် ပြည်ပျက်မယ်ဆိုတဲ့စကား ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြား မ ဖျက်ရင် ပြည်ပျက်တယ်ဒီစကားပုံကို လူတော်တော်များများက မိန်းမဖျက်ရင် ပြည်ပျက်မယ်လို့ ဆိုလိုတယ် ထင်မှတ်နေကြတာ။ ဒီစကားပုံ ဘာကြောင့်ပြောလဲ ?ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး Dr နန္ဒမာလာဘိဝံသ ရှင်းတမ်းလေးမှာ မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်။ မိန်းမ ဖျက်လို့ ပြည်မပျက်ပါဘူး မ ဖျက်ရင်သာ ပြည်ပျက်တာပါ မ ဖျက်ရင် ပြည်ပျက်မယ်ဆိုတဲ့စကားကို လူမှန်းသိစတဲက ကြားဘူးပါတယ် ဥပဒေတခု ရေးဆွဲကြမယ်ဆိုရင်တားမြစ်ချက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် […]
အသည္းကြဲတဲ့အခါ သင့္ခႏၶာကိုယ္ကပါ ဒီလိုေတြ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ခံစားရပါတယ္
အသည်းကွဲ တဲ့အခါ လူတစ်ယောက် အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှာပဲ ခံစား ရတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်း ခန္ဓာကိုယ်ကပါ အသည်းကွဲ တဲ့ဒဏ်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားရတယ် ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား ? (၁) အစားသောက် မမှန်တာမျိုး ဖြစ်လာ နိုင်ပါတယ်။ အရမ်းစား မိတာမျိုး၊ အစာစားချင် စိတ်ကို မဖြစ်တော့တာ မျိုးတွေေ ပါ့ ။ (၂) နှလုံးခုန်နှုန်းတွေ နည်းလာ ပါလိမ့် […]
မၾကာမီ ႀကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္ရင္ ဒါေတြကို လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါ
မကြာမီ ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် ဒါတွေကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါ ကြီးပွားချမ်းသာချင်ရင် အာစိဏ္ဏကံကုသိုလ် ဘုရားရှိခိုးဖြစ်ရဲ့လား။ သောက်တော်ရေရောနေ့စဉ်ကပ်ဖြစ်ရဲ့လား။ဘုရားပန်းလည်း အပတ်စဉ်လှူဖြစ်ရဲ့လား။ အဲ့လို့နေ့စဉ်လုပ်ရင် …ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတာလို့ ခေါ်တယ်။ မကြာခင် ကြီးပွါးတော့မယ့် လက္ခဏာပဲ။ သေချာမှတ်ထား၊ လောကမှာ အကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်၊ ကုသိုလ်ကို စွဲသွားတဲ့လူရယ်လို့ လူနှစ်မျိုးရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ အကုသိုလ်ဘက်မှာ စွဲသွားပြီဆိုရင် အဲဒီလူဟာ မကြာခင် မွဲသွားတတ်တော့တာပဲ။ တွေ့ဖူးတယ်မလား၊ အရက်သေစာသောက်စားမှုကို စွဲသွားတဲ့သူတွေ၊ မကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာ စွဲလမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုလေ။ အဲ့သလို […]
ဆီးဖြူသီးရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံ ၆၁ နည်း
ဆီးဖြူသီးရဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပုံ ၆၁ နည်း (၁) ဒူလာသွေးဝမ်းပျက်ရောဂါအတွက် ဆီးဖြူသီးခြောက်ကို ငါးရှဉ့်နှင့် ချက်စားရသည်၊ (၂) အရေးပြားတွင် ဖြစ်တတ်သော ယားနာ၊ပွေး၊ညင်း၊တင်းတိပ်များအတွက်ဆီးဖြူသီးခြောက်(သို့)အစိုကိုသွေး၍ သံပုရာသီးအနည်းငယ်ထည့်ပြီးလိမ်းရသည်။ (၃) ဆီးချိုရောဂါအတွက် ဆီးဖြူ(သို့)မြေဆီးဖြူ ပဥ္စငါးပါးပြုတ်သောက်ရသည်၊ (၄) နှားခေါင်းသွေးလျုံလြင်းအတွက် ဆီးဖြူသီးကို ကြိတ်၍ထိပ်ကအုံပေးရသည်။ (၅)ဆီးပုပ်ရောက်ဂါအတွက် ဆီးဖြူသီးခြောက်မှုန့်ကိုထန်းလျက်၊များရည်၊တကာနှင့်နယ်စားရသည်။ (၆)သွေးဝမ်းသွားလျှင် ဆီးဖြူသီး အစိမ်းကိုထောင်း၍ အရည်ညစ်ယူပြီးသံပုရာရည်နှင့် သောက်ရသည်။ (၇) လျှာကွဲခြင်း၊ပါးစပ်ကွဲခြင်း၊ပေါက်ခြင်းနှင့်ရေစီးကမ်းပြိုခြင်းများအတွက် ဆီးဖြူသီးရွက်ကို ရေနှင့်သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍ရသော အရည်ကို ပလုတ်ကျင်းပေးရသည်။ (၈)ဆီးဖြူသီးသည် […]
ကားဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက်
ကားဝပ်ရှော့ဆရာတွေ ပြောပြထားတဲ့ သင့်ကားကို ဘယ်တော့မှမလုပ်သင့်တဲ့ အချက် ( ၁၀ ) ချက် ယနေ့ခေတ်ကားတွေဟာ လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် တွေရှိနေပါပြီ၊ ပြီးတေည့ ကွန်ပြူတာတွေကလည်း အားလုံးကိုချောမွတ်အောင်သွားစေနိုင်ဖို့၊ လွဲမှားနေတဲ့ အမိန်ပေးမှုတွေကနေ ဖြစ်စေတဲ့ ကားပိတ်ခြင်းတွေ ၊ကားမောင်သူတွေကို ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ငြင်ဆိုနိုင်စွမ်းတွေက ကောင်းတာတွေဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ဦးတည်နေပါတယ်၊ ၁။ အင်ဂျင်ကို ကားမောင်းနေရင်မပိတ်ပါနဲ့ အကယ်၍ သင်ဟာ အမြန်ဆုံးအလျင်နဲ့မောင်နေရင်းနဲ့ မတော်တဆ အင်ဂျင်ပိတ်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှတော့မကောင်းတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ယနေ့ခေတ်ကားတွေက […]
အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၆)ချက်
အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိသာစေတဲ့အချက် (၆)ချက် ချစ်သူရွေးကြတဲ့အခါ ဘယ်လို စံနှုန်းတွေနဲ့ ရွေးကြမှာလဲ။ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ideal type တွေက မတူကြပေမယ့် အချစ်ရေး ကံကောင်းချင် ကြတာကတော့ လူတိုင်းပါ။ ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ ပျိုမေတို့အနေနဲ့ အချစ်ရေးမှာ လူရွေးမှားနေပြီဆိုတာ သိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးချင် ပါတယ်။ (၁) သင်လုပ်သမျှအရာရာကို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တတ်တယ်။ သင်ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစား ပုံစံကအစ၊ သင်ရွေးချယ်တဲ့ ဂီတ၊ […]